I-Roomba 980 yi-iRobot - iSearch
Qala yasendlini Imishini I-Roomba 980 ngu-iRobot
Ku- I-Roomba 980 ngu-iRobot Kuyinto idivaysi ekhombisa ngokunganaki. Akekho okumele akhathazeke ngesisekelo, ngoba kunezinketho eziningi zokududuza, ukunethezeka kokusetshenziswa kanye namakhono omuhle wokuzulazula. Idivayisi ayikho nje eqinisekisa ukuthi kulula ukuyisebenzisa, idinga nokugcinwa okuncane. Okubi kuphela ukuthi amamodeli awasho eshibhile nokuthi amandla okulwela angaphezu kwesilinganiso.
Imodeli ingenye yezinsiza zokuhlanza ezihlakaniphile kakhulu emakethe. le irobhothi i-9 kuphela amasentimitha anguphezulu futhi agcwele ubuchwepheshe ekugcineni. Ngenxa yenkhamera yelayili, idivayisi kungenzeka ukuthi isekelwe kuzici zendlu njengezibani, ifenisha noma izithombe. Ngezansi, kunezinzwa ezibona inhlabathi, izindawo ezingcolile kakhulu kanye nokufika okujwayelekile. Futhi ngaphezu kwamahle kakhulu I-Roomba 980 ngu-iRobot Hlanganisa imodeli ngokuthembekile.
Uhlelo lokusebenza lwe- cleaner kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi
der irobhothi bese enza umsebenzi wakhe uma ucindezela inkinobho. Mayelana nohlelo lokusebenza, noma kunjalo, kuza inani elengeziwe. Uma ngabe imodeli ingeniswa kwi-WLAN yasekhaya, wonke umuntu uyakwazi ukulawula uhlelo. Emhlabeni wonke, i cleaner kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi bese uqala futhi kukhona neminye imisebenzi eminingi. Inikeza isimo sezingxenye, izibalo ezihlukahlukene kanye nezindlela ezine zokuhlanza. Kuhlelo lokusebenza, isibonelo, kubonakala uma isitsha singenalutho noma uma sidinga ukugcinwa kwenjini. Ngaphezu kwalokho, kusiza imibhalo nemiyalelo etholakala.
Uphi lapho usondliwe?
Kulolu chungechunge lwe-900er, i-iRobots iyasuka ekuhlukeni okunamandla kuya emigwaqeni elawulwayo. Uma kunokwenzeka, i I-Roomba 980 ngu-iRobot ikamelo lonke lendawo ngomugqa. Ezimweni eziningi, lokhu kuhlinzeka ngokugcwele futhi indlela yokusebenza iyashesha. Kumele kuqashelwe ukuthi ikhamera isenento yokulwa kuphela emnyama. Ngaphandle kwalokho imodeli ayinaso izinkinga nezithiyo. Izitini ze-Lego, amasokisi noma izintambo azikhishwe noma ziphinda ziphanye futhi. I-model iyakufanelekela ekamelweni lezingane. Nge-Virtual Wall, indawo ingabuye ivaliwe, uma lokhu kungasetshenzisiwe.
der irobhothi ngokuvamile ivakala ngamandla ngamandla. Ngokuvamile kaningi kakhulu, ngoba i-sucker kumodi ejwayelekile iphenduka kuphela uma kudingeka. Ngamandla Amandla, isibonelo, izindawo ezingcolile kakhulu noma amaphepheni amancane asetshenzwa. Ikakhulukazi namafulethi amakhulu afanelekayo lemodi, ngakho ibhethri alondoloziwe. Lokhu kubalulekile uma izakhamuzi zasekhaya ngesikhathi sokuhlanza. Ngokuyinhloko imodeli ingasondla eTurbo ngaphandle kokuphazamisa.
Ukulethwa kanye nokwakhiwa
Ku- I-Roomba 980 ngu-iRobot Ngaphandle kwebhobhothi, kunezihlungi zokufaka esikhundleni kanye nezibhamu ezisekelwe endaweni ekulethwa kwezidingo. Kukhona nesango elibonakalayo nesiteshi sokushaja. Imodeli ingahle ibekwe kalula futhi empeleni isiteshini sokushaja kufanele ibekwe endaweni efunayo. Ngemuva kwalokho amandla asekhona. Indoda encane e-Sauber iqala ukuthutha ngubani ocindezelwe inkinobho ehlanzekile.
IRobot Roomba 980 Bagless Black Robot Vacuum Cleaner I-Bagless I-Vacuum Cleaner Ama-robots (, amnyama, i-Chocolate, i-Carpet, ikhamera, i-2 H, i-35 cm gauge
Isilinganiselwa: 1.0/ 5. Kusuka ku-1 ivoti.
Isihloko esilandelayometal detector